९ जनाको सामुहिक हत्या गर्ने ज्वाइ नै थिए त ? « Bagmati Samachar
९ जनाको सामुहिक हत्या गर्ने ज्वाइ नै थिए त ?
७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १६:१८
७ जेठ । काठमाडौं । सोमबार राती पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३ आरुबोटेमा विभत्स तरिकाले दुई परिवारका ९ जनाको सामूहिक हत्या भएको छ ।
प्रहरीको एउटा टोली त्यतैतिर सोझियो । प्रहरीले मिक्लाजुङ गाउँपालिका –७ मा एक युवकको झुण्डिएको अवस्थामा शव देख्यो । प्रहरीले लगत्तै अनुसन्धान थाल्यो ।
प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा झुण्डिएर आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको पहिचान भयो –मानबहादुर माखिम । मानबहादुर हत्या गरिएका ७४ वर्षीय बमबहादुर फियाकका कान्छा ज्वाइँ रहेको खुल्यो ।
प्रहरीका अनुसार घटनामा बाँच्न सफल सीता मानबहादुरको सालीकी छोरी हुन् ।
मानबहादुर र श्रीमती मनकुमारी फियाकबीच विगत केही वर्षदेखि पारिवारिक विवाद हुँदै आएको बताइएको छ । पारिवारिक विवादका कारण श्रीमती माइतीमा बस्दै आएकी थिइन् । उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेदको अन्तिम तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
यता, सीताले पनि घटनामा एक जना मात्र आक्रमणकारी देखेको बयान दिएको कारण मानबहादुरले पारिवारिक रिसिबीका कारण हत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको भनाई छ ।
चार दिनअघि नुनमा सिसा मिसाइएको थियो
हत्या गरिएका धनबहादुर शेर्माको घरमा केही दिनअघि पनि अर्को घटना पनि घटेको पाइएको छ । मिक्लाजुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष उर्मिला राईका अनुसार धनराज शेर्माको घरमा ४ दिनअघि मात्र अर्को रहस्यपूर्ण घटना घटेको थियो ।
उपाध्यक्ष राईका अनुसार गाउँमा धनराज शेर्मा सानो पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
केही दिनअघि प्रशिक्षण दिनका लागि साना घरेलु विकास कार्यालयबाट एक टोली गाउँमा आएका थिए । एक स्थानीयका अनुसार मानबहादुर पनि त्यहीँ थिए ।
त्यतिबेला उनीहरुका लागि बनाइएको खानामा प्रयोग गरिएको नुनमा सिसाको धुलो हालेको पाइएको थियो । जसले गर्दा टोलीका सदस्यहरु नै बिरामी परेका थिए ।
उपाध्यक्ष राईले भनिन्, ‘त्यो खाना खाएर केही मान्छे बिरामी परेका थिए । त्यसको ४ दिनपछि अहिले परिवारैको हत्या भएको छ । घटना रहस्मय छ ।’
खानामा कसले सिसाको धुलो भएको नुन हालेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहँदा ४ दिनपछि यस्तो घटना घट्नुले धेरै प्रश्नहरु उब्जाएको वडाध्यक्ष राईले बताइन् ।
खाना बनाउँदा त्यतिबेला कसले सिसा भएको नुन हाल्यो भन्ने पनि अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
स्थानीयका अनुसार साना घरेलु विकास कार्यालयबाट प्रशिक्षण दिन आएको टोलीलाई खानामा प्रयोग गरिएको नुनमा सिसाको धुलो मानबहादुरले मिसाएको भन्दै ससुरा बमबहादुरले आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
बमबहादुरले घरमा जो आएपनि खानामा प्रयोग गरिएको नुनमा सिसाको धुलो मिसाउने मानबहादुर हो भन्दै प्रहरीमा उजुरी हालेर कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै आएको ती स्थानीयले बताए ।
सोमबार साँझ बमबहादुरले घर नजिकै आएका मानबहादुरले सुन्ने गरी सोही कुरा निकाल्दै कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
यही कारणले रिसको झोकमा सामूहिक हत्या भएको हुनसक्ने स्थानीयको भनाई छ ।
आत्महत्या गरेको नजिकै भेटियो खुकुरी
दुई परिवारका नौ जनाको विभत्स हत्या भएसँगै काठमाडौँबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० को टोली घटनास्थल गएको छ । घटनाको अनुसन्धानको लागि एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदी नेतृत्वको टोली घटनास्थलतर्फ गएको हो ।
एसपी उमाप्रसादको टोली १२ बजे हेलिकप्टरमार्फत घटनाको अनुसन्धानको लागि काठमाडौंबाट पाँचथरतर्फ टोली लिएर गएका हुन् ।
यता घटनाको अनुसन्धानका लागि संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयका एसएसपीको नेतृत्वमा पनि टोली घटनास्थल पुगेको छ । यस्तै प्रदेश प्रहरीको विशेष टोली र क्षेत्रीय अनुसन्धानको कुकुरसहितको टोली अनुसन्धानको लागि घटनास्थल पुगेको छ ।
प्रहरीले भने वास्तविक हत्यारा को हुन भन्नेबारे अनुसन्धानपछि मात्र पुष्टि गर्न सकिने बताएको छ ।
तर, विभिन्न घटनाक्रम, स्थानीयको भनाई र सीताको बयानले हत्याको सुई मानबहादुरतिर नै तेर्सिएको छ ।